LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking 4.1.278 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.1.278 လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား လူမႈေရး LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အဆိုပါ LinkedIn တို့ app ကိုယောဘရှာဖွေရေးစမတ်။ , သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီများနှင့်ရက်စွဲကိုမှတက်နေဖို့, သြဇာကိုလိုကျနာနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားရန် # 1 အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက် app ကိုအသုံးပြုပါ။ LinkedIn တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, သြဇာ, န်ထမ်း, လုပ်ငန်းရှင်များ, ငှားရမ်းမန်နေဂျာရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတွေးခေါင်းဆောင်များအဘို့အထိပ် social network ဖြစ်သည်။ ယနေ့အခမဲ့ app ကိုစမ်းကြည့်ပါ!
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်လုပ်ရှာကြံ? သင့်ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကွန်ယက်ကိုထိတွေ့ထားလိုပါသလား? နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းရှာဖွေနေပါသလား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေခြင်း? အခမဲ့ LinkedIn တို့ app ကိုနဲ့နှင့်ပိုပြီးလုပ်ပါ။ သင်တစ်ဦးကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းဝါရင့်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, LinkedIn တို့ဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကနေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏အကြီးဆုံးကွန်ယက်ကိုသင်ဆက်သွယ်။
LinkedIn တို့အပေါ်သင်၏နောက်အလုပ်ရှာနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များချိတ်ဆက်ရနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သတိပြုမိရ။ အချိန် Save နှင့်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုရာထူးကိုရှာဖွေအလုပ်အကိုင်အဖွင့်သန်းပေါင်းများစွာမှတဆင့်စီစစ်ရန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Finder အဖြစ် LinkedIn တို့ကို အသုံးပြု. သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးမြှင့်တင်ရန်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ပထမဦးဆုံးဖြစ်နိုင်အောင်သင့်ရဲ့နောက်တော်သို့လိုက်သည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အသစ်သောအလုပ်အကိုင်များ posted အခါအကြောင်းကြားဖို့အလုပ်သတိပေးချက်များသတ်မှတ်မည်။
, သင့်ကွန်ယက်ကိုတည်ဆောက်သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အောင်မြင်မှုကိုတိုးမြှင့်, သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ရန် LinkedIn တို့ကိုသုံးပါ။ အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်၌သင်တို့၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်းနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့အ Apply ။ သင်တစ်ဦးလွှဲပြောင်းပေးရန်သင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည့်ကုမ္ပဏီများမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်ကိုမေးပါ။ ဤအမှုအလုံးစုံကိုငှားရမ်းတဲ့သင့်ရဲ့လေးသာမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်ပါလိမ့်မယ်။
LinkedIn တို့သူငယ်ချင်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ, ကုမ္ပဏီများ, စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်, LinkedIn တို့အသိုင်းအဝုိင်း၏ကျန်အားဖြင့်သင်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကွန်ယက်လွယ်ကူစေသည်။
5 အကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်သင် LinkedIn တို့ app ကိုကိုခစျြပါလိမ့်မယ်:
- လူမှုကွန်ယက်: သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကို Create & သင့်ရဲ့ skillset မီးမောင်းထိုးပြ
- ယောဘရှာဖွေရေး & စုဆောင်းရေး: သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုမှကိုက်ညီညာဘက်အနေအထားကိုရှာပါနှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူလျှောက်ထား
- စက်မှုဝန်ကြီးဌာနသတင်း: ဝေမျှမယ်ဆောင်းပါးများသို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးသားချက်များကိုရေးသား
- အခွင့်အလမ်းများကိုလိုက်နာပါ: သင်စိတ်ဝင်စားနေသည့်ကုမ္ပဏီများငှားရမ်းလျှင်ကြည့်ရှုပါ
- Professional ကကွန်ယက်ကို: သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုလိုက်နာပါ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ် Create, သင့်အသိပညာဝေမျှ, သင့်အိပ်မက်အလုပ်လျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်းသတင်းရပါတယ်။ LinkedIn တို့သငျသညျထမ်းခေါ်ယူမှု, ပညာရှင်များနှင့်ကုမ္ပဏီများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းပေးထားပါတယ်။
LinkedIn တို့ App ကို Features:
•အုပ်စုများကြောင့်ရှယ်ယာကို Join နှင့်သင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုထောကျပံ့
• updates များကို & လှုပ်ရှားမှုများကြည့်ဖို့ကုမ္ပဏီများ, သြဇာများနှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကိုလိုက်နာပါ
•အ LinkedIn တို့အသိုင်းအဝုိင်းနှင့်အတူဝေမျှမယ်ဆောင်းပါးများနှင့်သင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်
•သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရေးသားချက်များရေးရန် & သင့်ကွန်ယက်သူတို့နှင့်အတူဝေမျှ
•သင့်အတှေ့အကွုံကိုမီးမောင်းထိုးပြနေတဲ့ကို virtual ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အဖြစ်သင့် LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းကိုသုံးပါ
•သင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင်သင့်ရဲ့အောင်မြင်မှု, အလုပ်တာဝန်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု Share
ယောဘ search & အလုပ်မှာ Finder
•အလုပ်အကိုင်များရှာပါ & သင့်ရဲ့ LinkedIn တို့ပရိုဖိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကို အသုံးပြု. လျှောက်ထား
•အလုပ်ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ & သစ်ကိုအဆက်အသွယ်ရှာတွေ့
ယောဘသည်ထမ်းခေါ်ယူမှု, ပညာရှင်များ, စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ, အလုပ်ရှာဖွေရေးကိရိယာများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများသင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ LinkedIn တို့ app ကို, ကွန်ယက်အလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားခြင်းနှင့်အသစ်သောအဆက်အသွယ်တွေ့ရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းကမ်းလှမ်း - ဖြောင့်သင့်ဖုန်းမှ, သင်သွားလေရာရာ၌။
LinkedIn တို့၏အများဆုံးလုပ်လိုပါသလား? သီးသန့် tools တွေကိုတစ်ပရီမီယံကြေးပေးသွင်းဖို့ Upgrade ။
သငျသညျဒီ app ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါကျနော်တို့အနည်းငယ်ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံ။ http://linkd.in/1l0S8YZ: ဒီနေရာမှာအဘယ်ကြောင့်ဖွင့်
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking အား အခ်က္ျပပါ
boogie18 စတိုး 27 15.01k
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.1.278
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
လက်မှတ် SHA1: 44:3C:B9:97:71:8D:0A:C5:16:28:88:BA:E5:E4:72:45:82:86:26:76
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jaikumar Ramanathan
အဖွဲ့အစည်း (O): LinkedIn Corp
LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ